Maaddaama ganacsatadu u fiirsanayaan dib-u-furidda iyo soo-kabashada COVID-19, Ganacsigu wuxuu ku dhawaaqayaa barnaamijka amaahda cusub ee dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Flex Fund ee ganacsiyada yaryar ee Washington iyo kuwa aan macaash doonka ahayn - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Maaddaama ganacsiyada ay fiirinayaan dib u furista iyo soo kabashada COVID-19, Ganacsiga wuxuu ku dhawaaqayaa barnaamijka amaahda cusub ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Flex Fund ee ganacsiyada yaryar ee Washington iyo kuwa aan macaash doonka ahayn
Barnaamijku wuxuu la shaqeeyaa oo loo sii maraa hay'adaha amaahda ee maxalliga ah ee lagu kalsoon yahay si ay u taageeraan ganacsiyada taariikh ahaan aan loo adeegsan
OLYMPIA, WA - Milkiilayaasha meheradaha yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee ku yaal daafaha Washington waxay bilaabi karaan codsashada maanta amaahda dulsaarka hooseeya ee gaaraya $ 150,000 iyada oo loo marayo shirkadda cusub ee la bilaabay Sanduuqa Flex ee Ganacsiga Yaryar. Sanduuqa waa iskaashi dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn - gaar ahaan kuwa ku jira bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo - inay soo kabtaan oo ay koraan iyadoo bulshada gobolka oo dhan dib loogu furay ganacsiga.
Gov. Jay Inslee bishii Nofeembar 2020 ansixiyay maalgashi aasaasi ah oo dhan $ 30 milyan waaxda ganacsiga gobolka si loo abuuro barnaamij amaah soo kabasho ah. Ganacsigu wuxuu iskaashi la leeyahay dhowr hay'adood oo maaliyadeed iyo ururro bulshada ka dhisan si ay u amaahiso $ 100 milyan ama ka badan ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn oo ay ka yaryihiin 50 shaqaale ah iyo dakhliyada sannadlaha ah ee ka yar $ 3 milyan.
U qalmida ganacsiyada iyo kuwa aan macaash doonka ahayn waxay dalban karaan amaah dhan $ 150,000. Deymaha waxaa lagu heli karaa shuruudaha amaahda ee 60- ama 72-bil oo dulsaarka dulsaarku u dhexeeyo 3-4.5%.
"Dib u furida dhaqaalaheena waa guul muhiim ah waxaana rabnaa inaan hubino in ganacsiyadayada ugu yar iyo kuwa aan macaash doonka aheyn ay helaan sinaan taageero dhaqaale oo dabacsan si ay dib ugu soo noqdaan cagahooda," ayuu yiri Inslee. “Sanduuqa Yaryar ee Flex Flex ma caawin doono oo keliya dib-u-soo kabashada ganacsatadeenna ee aafada, laakiin waxay u oggolaan doontaa iyaga inay horay u sii qorsheeyaan, u koraan oo u koraan. Tanina waa aalad sii socon doonta sannado badan, si loo xoojiyo ganacsiyadayada ugu yar iyo ururrada aan macaash doonka ahayn xilliyada dhibaatooyinka dhaqaale.
“Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu iftiimiyay iftiin badan oo ku saabsan sinnaan la’aanta iyo caqabadaha soo food saaray bulshooyinka kala duwan. Mid ka mid ah caqabadahaas ayaa ah helitaanka raasamaal shaqo oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee isku dayaya inay horumariyaan oo ay koraan, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha dakhligoodu hooseeyo oo ay hoggaaminayaan haweenka iyo dadka midabkoodu kala duwan yahay, ”ayay tiri Lisa Brown, oo ah Agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington. "Waxaan u qaabeynay Sanduuqa Flex ee Yaryar ee Flex si ay u siiso fursad dheelitiran sinnaanta kobaca ganacsiyada yaryar, kuwa maxalliga ah iyo kuwa aan macaash doonka ahayn, taas oo hubinaysa dib-u-soo-kabashada dhaqaale ee weyn ee dhammaan Washington."
Sanduuqa wuxuu la shaqeeyaa soona maraa hay'adaha maxalliga ah ee horumarinta maaliyadeed ee horumarinta bulshada (CDFIs), oo u adeegta hoos yimaada bulshooyinka wax haysta iyo ganacsiyada hoostaga Bangiga Yaryar ee Flex Fund ayaa ujeedkiisu yahay inuu caawiyo.
“Evergreen waxay ku faaneysaa inay dadaalkeena u keento khibradeena tobanaan sano. Waxaan aaminsanahay in barnaamijkani faa iido weyn u yeelan doono ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee gobolka Washington, ”ayay tiri Patti Kibbe, oo ah maamulaha Evergreen Business Capital Community Finance, CDFI oo fadhigeedu yahay Seattle.
Dhammaan ganacsiyada yaryar ee ay ka yaryihiin shaqaalaha 50 iyo $ 3 milyan oo dakhli sanadle ah ayaa dalban kara waxaana laga heli karaa kaalmo xagga luqadda ah oo ku habboon dhaqan ahaan. Codsadayaasha xiisaha lihi waxay horay u codsadaan Flex Fund's bogga internetka iyo, haddii ay u-qalmaan, waxaa lala jaan qaadayaa amaahiye. Marka la iswaafajiyo, amaahiyaha kaqeybgalaya ayaa ka caawin doona milkiilaha ganacsiga inta lagu gudajiro nidaamka dalabka wuxuuna bixin doonaa taageero latalin dheeraad ah Haddii ganacsi uusan u qalmin, waxay ku xirnaan doonaan urur bulsho oo lagu kalsoon yahay oo ka caawin kara helitaanka ilo kale.
Shan CDFIs ah ayaa asal u ah amaahda Sanduuqa, oo ay ku jiraan Ascendus, Ganacsiga Saamaynta NW, Craft3, Evergreen Business Capital Community, iyo Sanduuqa Amaahda Saamaynta Bulshada ee Golaha Horumarinta Qaranka. Shabakadan amaah bixiyeyaashu waxay leeyihiin khibrad tobanaan sano ah oo loogu adeegayo dadka asaliga ah, kuwa miyiga ah, iyo kuwa soogalootiga ah iyo waliba jaaliyadaha midabbada ah ee ku baahsan Washington.
CDFIs sidoo kale waxaa taageeri doona hogaaminta kaalmada farsamada iyo ururada taageerada ganacsiga oo ay kujiraan Saamaynta Ganacsiga Northwest ee Xarunta Ganacsiga Haweenka Washington iyo Xarunta Fidinta Ganacsiga ee Halyeeyada, Xarunta Ganacsiga Loo Dhan Yahay (CIE), Hay'ada Horumarinta Ganacsiga Tirada Yar - Xarunta Ganacsiga Tacoma, Sister Sky Inc. , Ventures Nonprofit iyo Spokane Neighborhood Action Partners (SNAP) Helitaanka Maaliyadeed.
Sanduuqa Yaryar ee Flex Flex waxaa maamula Golaha Horumarinta Qaranka oo ay maalgeliso Calvert Impact Capital. Marka lagu daro maalgelinta Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, amaahda bilowga ah ee waxtarka leh waxaa bixiya Bangiga Heritage iyo WaFd Bank. Qoraal ay si wadajir ah u soo saareen ayay ku yiraahdeen, “Taageerayaasha muddada-dheer ee ganacsiyada yaryar ee Washington iyo saameynta ballaadhan ee ay ku leeyihiin bulshadooda, Heritage iyo WaFd Bank waxay aqoonsadeen muhiimadda ay leedahay in la taageero ganacsiyadaas muhiimka ah waxayna ku faraxsan yihiin inay horumariyaan kuwa gaarka ah ee gaarka loo leeyahay ee dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. iskaashiyo sida Sanduuqa Ganacsiga Yaryar ee Flex oo gacan ka geysta sii socoshada dhaqaalaha ee saameynta cudurkan.
Barnaamijka 'Small Business Flex Fund' ee arjiga khadka tooska ah iyo barnaamujyada iswaafajinta waxaa martigelinaya Sanduuqa Dib-u-maalgelinta Dib-u-maalgelinta, Mareykanka, oo ah CDFI qaran oo fadhigeedu yahay Minneapolis, MN.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u dalbato, booqo: www.SmallBusinessFlexFund.org
Ku saabsan Sanduuqa Flex ee Ganacsiga Yaryar
Sanduuqa Yaryar ee Flex Flex wuxuu siiyaa marin u helida deyn jilicsan, amaahda dulsaarka yar iyo adeegyada taageerada ganacsiga ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ee ku baahsan Washington. Waxaa taageeraya Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington, Sanduuqa waa iskaashi wadashaqeyn oo ka dhexeeya ururada maaliyadeed ee bulshada maxalliga ah iyo kuwa qaran ee loo abuuray in lagu taageero ganacsiyada ugu yar Washington iyo wax ka qabashada baahiyaha taariikheed ee hoos imanaya bulshooyinka hantida haysta iyo kuwa aan bangiyada lahayn. Sanduuqa waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaal ka kala socda qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin deyn bixiyeyaasha bulshada ee maxalliga ah, ururada samafalka ah ee qaranka iyo gobolka ku saleysan, shirkadaha, deeq-bixiyeyaasha samafalka, iyo maal-gashadayaasha - dhammaan kuwa jecel xiisaha soo kabashada ee gobolka oo dhan.
← Magacaabista Abaalmarinta “Smart Communities” ee Guddoomiyaha hadda way furan tahay Gobolku wuxuu ku boorinayaa milkiileyaasha iyo shirkadaha ka shaqeeya guryaha ganacsiga inay dib u eegaan liiska dhismayaasha cusub ee la soo dhejiyay oo ku xiran heerka XNUMXaad ee heerka waxqabadka dhismooyinka nadiifka ah ee Washington. →